SEO & amp; Digital Marketing - Kukurukurirana Kunobva Semalt
SEO & Digital Marketing - Kukurukurirana Kunobva Semalt
Fungidzira kuva nechitoro pasina chero chimiro chekuparidzira. Pakupedzisira, vanhu vanoda kuziva inogona kuwira mukati kuti iongorore zvigadzirwa kana kukumbira michina isiri yakabatana nezvauri kutengesa. Asi zvakadini kana iwe uine dare ne zita rakakodzera uye mifananidzo yezvinhu zvauri kutengesa? Izvi zvingakonzera vanotarisira vatengi kuti vaongorore, bvunza mibvunzo pamusorozvigadzirwa uye kunyange kutenga zvimwe zvezvigadzirwa - accessories for iphones. Izvi zvinogona kuparadzira shoko pamusoro pechitoro chako nezvimwe zvinhu kune vamwe vanhuiyo inoshandura mumigwagwa yakakwirira pamwe nekutengesa. Muenzaniso wokutanga wakafanana nesaiti isina kukwaniswa panguva yechipiri muenzaniso unoratidzira kune nzvimbo yakanakisisa yakagadzirwa.
Nyanzvi inotungamirira Semalt Digital Services, Andrew Dyhan, anorondedzera zvakajeka nzira yekubatanidza SEO uye nzira dzekutengesa dhigiriji.
Kutsvaga injini yekugadzirisa (SEO) ndiyo nzira yekuita nzvimbo yakaoma kuziva,Zviri nyore kuronga uye kuramba. Panyaya yepamusoro, kugadzirisa kunobatsira vashandi kuwana bhizinesi renyu pakati pezviuru kana mamiriyoni emamwe mabhizinesi uye inokosha chikamu chepi zvese yekutsvaga maitiro ekudhinda.
SEO chinangwa chekutyaira vashandisi kune bhizinesi renyu kuburikidza neIndaneti mapurisa. Kuti uite izvi,iwe webhusaiti yako inofanira kuve yakakwirira mumutsvaji wekutsvaga injini peji (SERP). Kuti izvi zvive nyore kunzwisisa, heino muenzaniso wakakwana:
Mwedzi woga woga, kune mabhiriyoni anopfuura 14 anoshanyira paIndaneti. Zvino, fungidzira chii zvaizoitika kana chikamu chiduku chekutsvaga mabhiriyoni 14 chiri kutsvaga bhizinesi rako. Kuti uwane mutemo unofanirwa kuendeswa kunzvimbo yako, ikambani inofanira kunge yakakosha zvikuru muSERP, kubhadhara mabasa ega ega nekushambadzira kwemashoko ehupfumi.
Kuti chero bhizimisi ripi neripi ribudirire, rinofanira kuzivisa. Uye pane chero bhizinesi rekuInternet,SEO ndiyo yakaenzana nekutengesa kusununguka. Kugadzirisa nzvimbo yako inoita kuti zvive nyore kutarisa papeji yekutanga yeSERP.
Sezvo kune chivimbo chakafanana chokuti vanhu vanoongorora uye vanoongorora mapeji ekutanga 2 eSERP,kunyoresa peji yekutanga kupa bhizinesi rako mukana wekuwanikwa kune vanhu vanotsvaka ruzivo vasati vatenga zvigadzirwa.
SEO inoshanda sei?
Search engine crawlers vanoshandisa mashoko kutarisa pejiyemabasa anounza migumisiro yekutsvaga kusanganisira kukamba, kuongorora, uye kurongedza pamwe nekuongorora kukoshesa nekudzoka.Zvinhu izvo zvinozivikanwa kuti zvinopa chikamu chepamusoro zvinosanganisira:
Kubatikana uye kushandiswa
URL uye mazita ewebhu
Kuti unzwisise kuti kutenderera uku kunoshanda sei, zvinokosha kuti upinde mumashoko ekuti SEO inoshanda sei:
Kana chipangara chikaguma chichikwira, mapeji akachengetwa kana akanyorwa mune imwe giant database apo zvakakosha ruzivo runobviswa apo chero munhu anoshandisa izwi rakakosha pane zvinjini.
3. Tsvaga basa:
Pose pakutsvaga kutsvaga, injini yekutsvaga inoita chikumbiro uye anozvienzanisa nehurukuro dzakasanganiswa. Kuti ipe data yakarurama, injini yekutsvaga inofanira kuenzanisa kukosha kwemapeji ose uye kufanana ivo neine indexed data, uye shoko guru rakapinda muSERP.
Ichi ndicho chigadzirwa chekuongorora chinogadziriswa kupeta kuburikidza nemakakatani emazwi makuru uye URL nemitsara inobatsira. Inofungidzira mhinduro dzinogona kuitika uye inodzorera mapeji nemutsara kana shoko rakaiswa panguva yekutsvaga. Chaizvoizvo, kune maitiro matatu ekugadzirisa: Pa-site, Off-site uye Whole-site maitiro ekugadzirisa.
Rudzi rwega yega yegorgorithm inotarisa nzvimbo dzakasiyana dzejiji yewebhulinks, meta tags, keyword density uye tereti tags. Sezvo kutsvaga injini kuchiri kugadzirisa maitiro avo, iwe unofanira kuramba uchitarisaiyo kuchinja kuitira kuti ichengetedze zvakakwirira.
Mugumisiro wekupedzisira wehutano unoratidzwa mumigumisiro yekutsvaga.
Kubatana pakati pe SEO nekutengesa digital
Vanhu vazhinji vanofunga kuti hapana musiyano pakati pe SEO nekutengeserana kwema digital,kuti ajekese izvi, zvinokosha kuti uzviongorore zvakanyanya. SEO inotarisirwa kuunza migumisiro yehupenyu. Kune rimwe divi, digital kushambadzira kunotarisirwa kuvepo kwehutano hwebhizimisi rebhizimisi rinoenda kunze kwekutsvaga injini yekugadzirisa. Kubatsira bhizinesi rekuInternetzvinobudirira, iwe unofanirwa kushandisa nzira yakakodzera yekutsvaga yekutsvaga uye kuisa munzvimbo inobudirira SEO hurongwa.
Dzimwe nyanzvi dzekutengesa dzinotaura nezveEO yakazara se digital integration marketing. Nokuwedzera, SEO inopinda mune chimwe chinhu chinonyanya kukosha chekutengeserana kwema digital. Kuti unzwisise izvi, unofanirwa kuonga kunyangwe SEO yakachinja sei mumakore. Nzira dzaive dzakabudirira mumakore makumi mapfumbamwe nemana kana 2011 dzakabva dzisati dzamboitika dzinoda nzira itsva.Nhasi, kune zvimwe zvakawanda zvezvinhu zvinoshandiswa kutungamira SEO kusanganisira vhidhiyo yehupfumi uye hukama hwakanaka husina kufanana nezvakaitika kare.
Kuumba sangano rakanaka re SEO
Kuti uve neSeO yakakura, unofanirwa kuisa SEO inobudirira sarudzo. Nzira yakanaka inosanganisira:
1. Misika inokosha:
Kubudirira SEO hakusi kungofambisa motokari kune yako nzvimbo, inofanira kubatsira kuitira kuti tive nemafungiro evanhu vanoona nezvemamiriro ezvinhu uye nzvimbo dzenharaunda kuti uone kuti uri kusvika kune tarisiro inofarira zvibereko zvako.
2. Mobile-friendly friendly approach:
Google inoda kuti mawebsite ave akakodzera mune zvigadzirwa zvemafoni uye anopa zvakaenzanakugutsikana kune vashandisi pane izvi zvakagadzirwa sevanhu vachishandisa makombiyuta.
3. Zvimwe zvinogona kushandiswa muzvinjini:
Kubudirira, nzvimbo yako haifaniri kungoita zvakanaka mune imwe injini yekutsvaga asi kune dzimwe injini dzinotsvaga.
4. Mashoko emashoko anoenderana nekudzoka pane zvekutsvaga:
Funga nezvekucherechedza uye kushandisa mazwi akakodzera ayo vanhu shandisa kutsvaga ruzivo kuitira kuti uve nechokwadi che ROI.
5. Nhamba yehutano nehuwandu hwewebsite:
Webhusaiti yako inofanira kunge yakashamwaridzana nevashandisi, yakajeka kufamba uye inofanira kuva nehuwandu hwehutano.
Pakupedzisira, munyika yekushandura masimba, iwe unofanirwa kuziva nguva iyo SEO inogara isingagumi. Kuti ikubatsire kufambira mberi mukati mekuchinja uku kose, funga pamusoro pezvinangwa zvako zvevateereri, uise panzvimbo yakasimba kugadzirisa maitiro uye funga nezvekushandiswa kwewebsite yako.